Madaxweynashii hore Ee Soomaliya Oo dhaqan Qar Iskatuurnimo ku Socda.(Akhriso) – hareerley News
Madaxweynihii hore soomaliya Sheekh Shariif Oo maanta Go’aansadey in uu u duulo Kismaayo Xanibaadna laga saarey in halkaasi u duulo.
Madaxweynayaashan hore ayaa la soo baxay dhaqan qar iskatuurnimo ah ayaagoo doonaya in ay u gacan dhafaan dowlada sharciyada ayku soo Rogey Maamulka kismaayo ee Maxaasta ku leynaya jubda hoose isagoo fulinaya dano Shisheeye.
Jahwareerka ka taagan Maamulka jubadahoose ama loogu yeerey Jubaland ayaa waxaa ka taliyey Madaxweynihii hore ee Soomaliya Xasan Sheikh Maxamuud Oo markii la dhisayey isaga ka fiirsadey danahiisa khaaska u ahaa maantana Siyaasado kale lasoo baxay.
Madaxweynayaashaan hore ayaa kuwo qaar waxaa dabada ka riixaya Dowlada Kenya oo iyada geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleysa sidii ay khilaafyo ugu dhex abuuri laheyd Siyaasiyiinta Soomalida.
Madaxweynayaashan hore ayaa iyagu isu heysta in Sharciga uusan qabanin Sharciguna uu yahay midka kaliya Oo ka dhaxeeya Shacabka iyo Mas’uuliyiin horeba qabanayane Cidii ku Xadgubta Danaha Guud Ee Gayiga.
Madaxweynayaashan ayaa ah mid Mushaakilka ka jira haatan soomaliya baday iyo mid isaga madaxweyne ahaa Markii bada soomaliya la gadanayey Hogaaminayey Soomaliya Oo aanan waxba lagu Aaminikareyn haatana Shisheeyahana u adeegaya.
Madaxweyne soo noqo amaba xilkale ka soo qabo Soomaliya hadaad doonto haddii aad ka hor timaado danaha guud Ee Gayiaga in leyska kaa qabto waa muqadas.
W/Q Cabduqaadir Saciid home fcb
(Akhriso):-Sidee loo soo xuli doonaa Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka K/Galbeed?
Sida wararka aanu ku heleno ayaa tilmaamaya in dhawaan la soo xuli doono baarlamaanka K/Galbeed kaas Oo lagu wado in ay soo xulaan markale Odayaasha dhaqanka K/Galbeed. Baarlamaankan ayaa tiradiisu ka koobney Xiligii Shariif Sakiin 145 Xildhibaan halka haatan la doonayo in la gaarsiiyo ilaa iyo 95 Xildhibaan kaas Oo markale lagu qeybsan doono nidaamkii […]
(Akhriso):Waxaa shaley Mudo Kororsi laga Biyodiidey ka dhacay Soomaliland Soomaliyana Muxuu Arinkeedu Noqon Doonaa?
Posted on November 25, 2019 November 25, 2019 Author Hareerley News
Madasha Wadatashiga Somaliland iyo Xisbiyaduba ayaa ka biyodiidey mudo kordhin Golaha Guurtidu ay laba sanadood ugu kordhiyeen Golaha Wakiilada ee Soomaliland. Siyaasi Madasha Wadatashiga oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi “Waa qalad in la kordhiyo oo laba sanadood loogu daro Golaha Wakiilada sidoo kale wuxuu yiri Golihii Wakiiladu way 20-jirsanayaan. Haddii aan […]
Fakar Fakar baa looga hortagaa:-(Akhriso)
Markaan Dawaday Vedio gii ugu danbeyey ee Shabaab Soosaareen iyo Warbixinadii hore ay u soo bandhigi jireen ee Raga ama wiilasha Qaraxyada loo adeegsado. Waxaa ii soo baxday in Gobolada Koonfureed Guud ahaan u badan yihiin gar ahaan Bay iyo Bakool . Waxaa ugu danbeysay weerarkii awdheegle oo laba will Reer Bakool ah isku Qarxiyeen. […]